Policy Brief of “Social Protection Across Borders” (2019) > Mekong Migration Network
Policy Brief of “Social Protection Across Borders” (2019)
The collaborative research presented in this publication comes atatime when formal social protection schemes are taking shape across the GMS, and migrant workers from the region are travelling, in ever greater numbers, to countries where social protection programmes are well established. Access to social protection for this growing cross-border workforce requires an urgent policy response, as migrant workers risk being excluded or denied access to benefits and left insufficiently protected in terms of their life cycle needs.
The Policy Brief of “Social Protection Across Borders: Roles of Mekong Countries of Origin in Protecting Migrants’ Rights” is now available in different languages:
Click here to download the policy brief in Burmese
Click here to download the policy brief in Khmer
Click here to download the policy brief in Vietnamese
Click here to download the policy brief in English
မဟာမဲခေါင်(GMS)ဒေသတဝန်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြေခံလူထု လှုပ်ရှားမှုများနှင့် သုတေသနအဖွဲ့အစည်း များကိုအကူအညီပေးနေသည့် ကွန်ယက်တစ်ခုအနေဖြင့် MMN သည် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုများ၏ အခွင့်အရေးကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ဤစာတမ်းတွင်တင်ပြထားသော ပူပေါင်း သုတေသနသည် GMS တစ်လျှောက်တရားဝင် လူမှုကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များပုံဖော် နေသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းမှရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ သည် လူမှုကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးအစီစဉ်များ ကောင်းစွာထူထောင်ထားသည့် နိုင်ငံများသို့ ပိုမိုများပြားစွာခရီးသွား လာနေသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ပိုမိုများပြားလာသည့် နယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်လုပ်သားအင် အားစုများအတွက် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရရှိရန် တုံ့ပြန်ရမည့် အရေးပေါ်မှုဝါဒတရပ်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိခြင်းမှ ဖယ်ထုတ်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် ငြန်းပယ်ခံရခြင်းနှင့် သူတို့၏ဘ၀လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်အရ အကာအကွယ်မလုံလောက်မှုများရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
“နယ်နိမိတ်များဖြတ်ကျော်၍ လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး – ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးအား အကာအကွယ်ပေးရာတွင်မဲခေါင်မူရင်းနိုင်ငံများခန်းကဏ္ဍများ” အမည်ရှိ စာတမ်းသည် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပနိုင်ငံ နှစ်ခုလုံးမှ လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များကို လက်လှမ်းမီနိုင်ရန်တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် မဟာမဲခေါင်မူရင်းနိုင်ငံများ၏အခန်းကဏ္ဍများကို လေ့လာထားပါသည်။ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံများကို အဓိကထားပြီး ဤနိုင်ငံများရှိ အစိုးရများ နှင့် သက်ဆိုင်သူများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့နိုင်ငံသားများဖြစ်သည့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ သူများအတွက် ပြည်ပသို့သွာရောက်ချိန်သော်လည်းကောင်း ပြန်ရောက်လာချိန်ကိုသော်လည်းကောင်း လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအခွင့်အရေးကို မည်သို့သော ကာကွယ်မှုအစီအမံများ ပြုလုပ်ပေးသည်ကို အသေးစိတ်လေ့လာထားပါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီ၏ အခန်းတိုင်းတွင် တည်ဆဲဥပဒေနှင့် မူဝါဒမူ ဘောင်များ၊ မူပေါ်လစီဆိုင်ရာကွာဟမှုများကိုမီမောင်းထိုပြထားခြင်း နှင့် အပြင်လောကတွင်တ ကယ့်ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေများကို ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ များမှသွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား၏အတွေ့အကြုံများကို (case studies) အဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ လူမှုကာကွယ်စောင့် ရှောက်မှုလက်လှမ်းမီခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လေ့လာရာတွင် တိကျခိုင်မာသော သုတေသနနည်းစနစ်၊ စားပွဲတင်သုတေသန၊ အဓိကသတင်းအချက်အလက်ပေးသူများ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ နှင့် case studies စုစည်းမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။